China Zvakatipoteredza zvine hushamwari zvakachengetedza bango rekunze uriri dhizaini Kugadzira uye Fekitori | Goridhe Bamboo
REBO chigadzirwa chakagadzirwa neshinda yemusango, kuburikidza nematani mazana mazana manomwe nemakumi matatu ekutsikirira anopisa uye kabhoni, izvo zvinoita kuti bhodhi igare yakasimba, yakaoma uye yakasimba. Bamboo decking iri kuwedzera kuve inozivikanwa mumisika yepasi rose. Icho chemberi chidiki chinozunguzirwa nehurefu kana rakatenderedzwa kumashure.
Kunze kwemishenjere igadziridzo yemushenjere. Iyo yakasvibirira yekunze inorema yemishenjere uriri inogadziriswazve moso bamboo, inova inoshamwaridzana nharaunda zvakanyanya Kunze kwepasi kunorema bamboo kunowanzo kurapwa nekupisa kwekupisa uye kwakanyanya kumanikidza. Naizvozvo, kuwanda kwepasi kunorema kwemishenjere kwepasi kwakakwirira zvakanyanya kupfuura kweyakajairika bango uye pasi pehuni.
Kuchengetedza ndechimwe chezvinangwa zveREBO, zvichiita kuti REBO Bamboo decking ive yechokwadi.
Kune zvinhu zvakawanda izvo vanhu vazhinji uye vazhinji vanosarudza tambo dzakarukwa senge zvigadzirwa zvekuvaka nekushongedza. Iwo akakosha maficha ekunze bamboo flooring akafanana nemabhero:
1) Hapana kurwa, hapana kutsemuka, kutsvedza kuramba.
2) Kudzivirira kwemvura, REBO mabhodhi emishenjere akaedzwa mumamiriro emvura uye akaitwa Kirasi 4, inoenderana nekunze, mukubatana nepasi uye nemvura nyowani.
3) Hapana chakuvhuvhu, hapana tupukanana infestation.
4) Inodzivirira kune yakanyanya mamiriro ekunze uye akasiyana mamamiriro ekunze
5) Zvakatipoteredza zvine hushamwari, kuchengetedza masango zviwanikwa.
REBO chigadzirwa chakagadzirwa neshinda yemusango, kuburikidza nematani mazana mazana manomwe nemakumi matatu ekutsikirira anopisa uye kabhoni, izvo zvinoita kuti bhodhi igare yakasimba, yakaoma uye yakasimba. Bamboo decking iri kuwedzera kuve inozivikanwa mumisika yepasi rose. Icho chemberi chidiki chinozunguzirwa nehurefu kana rakatenderedzwa kumashure. Kureba kwakaringana i1860mm, hupamhi hwepakati is140mm, ukobvu is18mm. Ehezve, iyo ukobvu inogona kuve 20mm uye nezvimwe. Zvinoenderana nezvikumbiro zvevatengi.
Pashure: E1 Eurpean standard eco-inoshamwaridzika yemishenjere yekunze
Zvadaro: Mamiriro ekunze anodzivirira E1 standard bamboo decking board